Nepali Christian Bible Study Resources - लेवी, गन्ती, व्यवस्था
» अध्ययन मालाहरू » पुरानो नियमका पुस्तकहरू » ३-लेवी, गन्ती, व्यवस्था
लेवी - पवित्र परमेश्वरको उपासना
यस पुस्तकको नाम किन "लेवी" राखियो?
लेवी ____________ का बाह्र छोराहरूमध्ये एक थिए (प्रस्थान १:१-२)। यस पुस्तकले लेवीका छोराहरूको बारेमा धेरै कुराहरू बताउँछ। लेवीका छोराहरू अर्थात् सन्तानहरू पनि "लवीहरू" कहलिन्छन् (हेर्नुहोस् लूका १०:३२)। के मोशा लेवीका सन्तानमध्येका थिए (प्रस्थान २:१-३,१०)? _____________
लेवीका छोराहरू - तिनीहरू नै लेवीहरू हुन्
हारूनका छोराहरू - तिनीहरू नै पूजाहारीहरू हुन्
लेवीको पुस्तकले "हारूनका छोराहरू" (पूजाहारीहरू) को बारेमा धेरै कुरा बताउँदछ। लेवी अध्याय १ मा "हारूनका छोराहरू" भनेर उल्लेख गर्ने पदहरू भेट्टाएर तिनलाई यहाँ सूचित गर्नुहोस्: ___________________। लेवीको पुस्तक पूजाहारीहरूका निम्ति परमेश्वरबाट दिइएको निर्देशिका पुस्तक थियो। मानिसहरूलाई उपासना कार्यमा नेतृत्व गर्न लेवी र पूजाहारीहरू खटाइएका थिए। उनीहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू परमेश्वरले यस पुस्तकमा बताइदिनुभएको थियो।
लेवीको पुस्तकको चाबी शब्द हो, "पवित्र"। यस पुस्तकमा उक्त शब्द ८० पटकभन्दा बढी पाइन्छ। उदाहरणको लागि, लेवी २१ औं अध्यायमा पवित्र भन्ने शब्द कति पटक भेटिन्छ? ________
साथै, लेवीको पुस्तकमा "पाप" र "अशुद्धता" भन्ने शब्दहरू धेरै पटक भेटिन्छन्। मानिस पापी छ, अशुद्ध छ। परमेश्वर पवित्र, शुद्ध र पापरहित हुनुहुन्छ। पापी मानिस कसरी पवित्र परमेश्वरको नजिकमा आउन सक्छ? एक अशुद्ध, फोहोरी मानिसले निष्कलङ्क र शुद्ध परमेश्वरको उपासना गर्न कसरी सम्भव छ?
यस पुस्तकको चाबी पद लेवी १९:२ मा भेटिन्छ - "तिमीहरू __________ होओ, किनभने म, ____________ तिमीहरूका _____________, __________ छु।" लेवी ११:४४,४५; २०:७,२६ मा पनि हेर्नुहोस्। पहिलो पत्रुसको अध्याय १ मा पनि यही कुरा कुन पदमा भेटिन्छ? पद ______
गन्ती - अविश्वासको समस्या
यसको शीर्षक किन "गन्ती" राखियो?
यस पुस्तकलाई "गन्ती" भनिन्छ किनभने दुई बेग्ला-बेग्लै समयमा इस्राएलका सन्तानहरूको "गन्ती" अथवा जनगणना गरिएको कुरा यसमा उल्लेख छ। पहिलो गणना गन्ती अध्याय १ मा भेटिन्छ। योचाहिँ इस्राएलका सन्तानहरूले लाल समुद्र पार गरेको केही समयपछि गरिएको गणना थियो। दोस्रो गणना गन्ती अध्याय २६ मा पाइन्छ। योचाहिँ करिब ४० वर्ष पछाडि गरिएको गणना थियो अर्थात् इस्राएलका सन्तानहरू प्रतिज्ञाको देशभित्र प्रवेश गर्नु ठीक अगाडी।
परमेश्वरका जनहरू यस संसारमा कसरी हिँड्नुपर्छ, कसरी जिउनुपर्छ? २ कोरिन्थी ५:७ मा बाइबलले भन्दछ, "किनकि हामी रूप देखेर होइन तर ____________द्वारा हिँड्छौं।" यस संसारमा हामी विश्वासद्वारा (परमेश्वरलाई विश्वास गर्दै, परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूलाई विश्वास गर्दै) हिँड्नुपर्छ। हामी विश्वासको बाटोमा हिँड्नु नै परमेश्वरको इच्छा हो।
उनीहरूको अविश्वासको कारणले गर्दा इस्राएलका सन्तानहरूले कडा दण्ड पाए। यी मानिसहरूले कहिल्यै त्यो ________ देख्न पाएनन् जुनचाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो (गन्ती १४:२३)। बरु उनीहरूलाई परमेश्वरले वर्षौंसम्म उनीहरू नमरेसम्म उजाडस्थानमै घुमिरहनुपर्ने सजाय दिनुभयो (गन्ती १४:२९)। गन्ती अध्याय १ मा गणना गरिएका ती हजारौं हजार मानिसहरू सबै नै उजाडस्थानमा मरेर जाने भए (यसको लागि करिब ३८ वर्ष लाग्ने भयो)। केवल दुईजना मात्र बाँच्ने र प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्ने भए। ती दुईजनाका नामहरू के थिए (गन्ती १४:३०)? १) ____________ २) ____________। बाँकी सबै नै "यसै _________________मा" मर्ने भए (गन्ती १४:३५)।
पुस्तकको चाबी पद यही अविश्वाससित सम्बन्धित छ। त्योचाहिँ गन्ती १४:११ मा भेटिन्छ - "यिनीहरूले कतिसम्म ममाथि ______________ गर्नेछन्?" परमेश्वर आफैंले यो प्रश्न गर्नुभएको हो! बारम्बार परमेश्वरका जनहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्न मानेनन्। यिनै व्यक्तिहरूको बारेमा हामी हिब्रू ३:१९ मा पढ्छौं - "यसकारण हामी देख्दछौं, ________________को कारणले तिनीहरू प्रवेश गर्न सकेनन्।" इस्राएलका सन्तानहरू प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्न सकेनन् किनभने तिनीहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्न मानेनन्! परमेश्वरले उनीहरूलाई एक असल देश दिनुहुने असल प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तर उक्त प्रतिज्ञाले उनीहरूलाई कुनै फाइदा गरेन। किन फाइदा गरेन (हिब्रू ४:१-२ मा हेर्नुहोस्)? _________________________________________
व्यवस्था - मोशाको व्यवस्था सम्बन्धी परमेश्वरको टिप्पणी
यहाँ नयाँ पुस्तालाई दोस्रो पटक परमेश्वरको व्यवस्था दिइएकोले यस पुस्तकलाई "व्यवस्था" (अङ्ग्रेजीमा Deuteronomy को अर्थ दोस्रो व्यवस्था हुन्छ)। निकै वृद्ध भइसकेका मोशाले यस पुस्तालाई होशियारसित व्यवस्थालाई दोहोर्‍याएर सुनाउँछन् र त्यसको व्याख्या गर्छन्। यी मानिसहरू प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्नेवाला थिए। पुरानो पुस्ता प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्न पाएनन्।
परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सक्न अगाडी हामीले पहिला मुक्ति पाउनु खाँचो छ! एउटा मुक्ति नपाएको व्यक्तिले यो महसूस गर्नैपर्छ: "म परमेश्वरको आज्ञापालन गर्न असफल भएको छु!म परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गर्न असफल भएको छु। मैले परमेश्वरका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरेको छु। म व्यवस्था भङ्ग गर्ने एउटा दोषी व्यक्ति हुँ!" तर मुक्ति नपाएको र दोषी व्यक्तिको निम्ति त्यहाँ एउटा खुशीको खबर छ! येशू ख्रीष्ट पापीहरू र व्यवस्था भङ्ग गर्नेहरूलाई बचाउनालाई संसारमा आउनुभयो (१ तिमोथी १:१५)। मुक्ति नपाएको व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो आज्ञा के हो (१ यूहन्ना ३:२३ को पहिलो भागलाई हेर्नुहोस्)? ___________________________________________________। के तपाईंले त्यसो गर्नुभएको छ? जब मुक्ति नपाएको व्यक्तिले यो पहिलो आज्ञा पालन गर्दछ, तब नै उसले मुक्ति पाउँदछ! तब उसले परमेश्वरका अरु आज्ञाहरू पालन गर्न सिक्न थाल्दछ! के तपाईं आज्ञा पालन गर्न सिक्दै हुनुहुन्छ?
"आज्ञा मान, भरोसा गर
अरु उपाय छैन, ख्रीष्टमा खुशी हुन!"
येशूले सिद्धरूपमा परमेश्वरको आज्ञापालन गर्नुभयो!येशूले सिद्धरूपमा व्यवस्थाको पुस्तकमा भएका सबै आज्ञाहरू पालन गर्नुभयो। शैतानले उहाँलाई परीक्षा गर्दा, उहाँले तीन-तीन पटक व्यवस्थाको पुस्तकलाई उद्दृत गर्नुभयो ("यो लेखिएको छ", "यो लेखिएको छ", "यो लेखिएको छ" - हेर्नुहोस् मत्ती ४:४,७,१०)। मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन भनी बताउने व्यवस्था ८ अध्यायको पद भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? पद ______। व्यवस्था ६ अध्यायको कुन पदमा हामीले परमप्रभुलाई परीक्षा गर्नुहुँदैन अथवा उहाँको जाँच गर्नुहुँदैन भनेर बताइएको छ? पद ______। मानिसले परमप्रभुको मात्र उपासना गर्नुपर्छ र भय मान्नुपर्छ भनेर बताउने व्यवस्था ६ अध्यायको पद कुन हो? पद _______
एक पुनरावलोकन: (१) उत्पत्ति - म नयाँ गरी जन्में! म एक नयाँ सृष्टि हुँ (२ कोरिन्थी ५:१७)! (२) प्रस्थान - परमेश्वरले मलाई पापको भयङ्कर दासत्वबाट छुटाउनुभयो (यूहन्ना ८:३२-३६)! (३) लेवी - ख्रीष्टको बलिदानको कारणले म पवित्र परमेश्वरको उपासना गर्न सक्दछु (१ पत्रुस ३:१८)। (४) गन्ती - मैले परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूलाई विश्वास गर्नुपर्दछ। विश्वास चाबी कुरा हो (हिब्रू ३ र ४)। (५) व्यवस्था - मैले परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्दछ। आज्ञापालन चाबी कुरा हो (यूहन्ना १४:१५,२१,२३)!
« उत्पत्ति र प्रस्थान
यहोशू, न्यायकर्ता, रूथ »